China Parallel Slide Valve maka uzuoku-mmiri sistem ụlọ nrụpụta na ndị nrụpụta | Convista
Parallel Slide Valve maka uzuoku-mmiri
.Dị Ọnụ ụzọ ámá
Nrụgide PN20-50MPa 1500LB-2500LB
Elu na-acha DN 300-500
A na-eji ya dị ka mmeghe na ngwaọrụ mmechi maka usoro mgbapụta ma ọ bụ usoro ọkpọkọ ndị ọzọ dị elu na nke dị elu nke 600 na 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine.
1.Ọ na - akwado nrụgide njiri onwe onye, ​​ya na njikọ ya na nsọtụ ya abụọ.
2.Ọ na - anabata valvụ uzo eletriki na ụzọ mbata na ntanetị maka idozi nsogbu dị iche iche na ụzọ mbata.
3.Ọ na-emechi usoro adopts yiri sọrọ-flashboard Ọdịdị. Akara valvụ sitere na nrụgide na-ajụ kama ịmalite ijikwa arụ ọrụ iji gbochie valvụ ahụ ka ọ ghara inwe nsogbu dị egwu n'oge mmeghe ya na mmechi ya.
4.Site na ngwongwo na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ihu ihu akara na-egosipụta nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsị corrosion, nkwụsị abrasion, ndụ ogologo ndụ na àgwà ndị ọzọ.
5.Nweta ọgwụgwọ na-egbochi ịta ahụhụ na nitrogenization ọgwụgwọ, valvụ azuokokoosisi elu atụmatụ ọma corrosion eguzogide, abrasion eguzogide na a pụrụ ịdabere nri igbe akara.
6.Ọ nwere ike dakọtara na iche iche na ụlọ na dị ka electric ngwaọrụ izute DCS akara chọrọ na-aghọta ime na obodo arụmọrụ.
7.A ga-emeghe ya ma ọ bụ mechie ya mgbe ọ na-arụ ọrụ. Agaghị eji ya dị ka valvụ na-achịkwa ya.
Nke gara aga: Mmiri zuru mụụrụ ụdị nchekwa valvụ (W usoro)
Osote: Ejirila Trunnion Ejiri Ego Ejiri Ejiri Ejiri Ziri Ezi
Mechiri emechi mmiri kwajuru full mụụrụ ụdị elu pressu ...
3226 AWWA C509 NRS Nọgidere Ọnụ Gatezọ Gatemá Valve
3233 AWWA C515 OS&Y resilient nọ ọdụ n'ọnụ ụzọ ámá ...
Bellows nchekwa valvụ
MA Usoro Ntugharị Na-agba ọsọ
LVP Water Ring agụụ mgbapụta